Windows 7 Password Cracker - Sida loo crack Windows 7 password in login
> Resource > Windows > Sida loo crack Windows 7 Password
Wax madax xanuun Waa arrin haddaad halmaanto password login ee your computer, nidaamka Windows 7, gaar ahaan waxaa jira xog muhiim ah kaydiyaa it on, taas oo ka joojinaaya inaad reinstalling nidaamka. Wakhtigan, si ay u helaan your computer iyo shaqada sida caadiga ah waxaa la, waxaad u baahan tahay Windows 7 cracker password , qalab awood u siiyaa inaad crach Windows 7 password oo si guul leh u galaan kombuyuutarka.
Sida loo crack Windows 7-ery?
Ka hor inta arrinkaas sirta ah ee aad Windows 7, isku day in aad sida ugu fiican u yeeray password ka xusuustaada. Wixii dagdag ah, dhalashadiisa, cuntada uu jecel yahay, magaca qofka muhiim ah, lambarka telefoonka iyo wixii la mid ah. Ha siin si deg deg ah. Tani waxay run ahaantii mararka qaarkood ka shaqeeya. Haddii Waxyaalahan oo dhammu waa ciirsi, waxaad dooran kartaa in la sii wado in sida soo socota.
Si crack password ee Windows 7 , marka hore waxaad u baahan tahay si aad u hesho Wondershare LiveBoot Downlaods CD / USB , kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u helaan your computer iyo crack Windows 7 password maamulaha si fudud. Arrinta No aad isticmaalayso Windows 7, Vista ama XP, barnaamijkan si fiican u shaqayn karaa waxa ku. Next, aynu u sameeyaan tallaabooyinka.
Step1. Abuur ah Windows 7 cracker disk
Ka hor inta shaqada, diyaarin maran CD / DVD ama drive USB ah. Markaas rakibi oo ay maamulaan LiveBoot ku on your computer, oo waxaad heli doontaa interface ee soo socda.
Geli drive disk ama USB galay kombiyuutarka ah, oo guji badhanka gubanaya, waxaad heli doontaa CD / DVD ama USB drive ah Downlaods. Waxa kaliya shaqo hal-click ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay si ay u daryeelaan ku saabsan uu doortay inuu ku gubi doonaan drive USB ah haddii aadan haysan gubi ah lagu rakibay on your computer, maxaa yeelay drive USB ah gubanaya uma baahna gubi dheeraad ah waxaad ka.
Step2. Helaan computer la Windows 7 password arrinkaas disk
Geli Windows 7 password disk arrinkaas ama USB drive ee aad abuuray galay computer ka, taas oo aad ka joojiyay waxaa ka mid ah. Bilow F12 computer iyo saxaafada marka nidaamka uu bilaabo inuu ku shuban, iyo waxaad heli doontaa Menu Device Boot ah. Dooro USB ee CD-ROM Drive oo ka dhacay on gala. Markaas waxaad heli menu kabaha soo socda. Dooro "Boot ka LiveBoot" oo waxaad geli kartaa nidaamka qufulan.
Ka dib markii ay soo galaan nidaamka, guji "Password & Key Finder" on interface ee LiveBoot. Markaas ka dhacay on the "Admin Password Resetter". Iyada oo kaliya hal click, aad dib kartaa Windows 7 sirta ah maamulaha asalka sida maran.
Tallaabada ugu dambeeya waa in la qaato ka mid ah drive disk ama USB iyo computerka aad. Waxaad ka heli doontaa in computer ma idin waydiin password kasta, oo aad login karaa si guul leh. Si aad u dhigay sir ah oo cusub, hubi in ay tahay sirta ah ammaan ah oo aad marnaba iloobin mar dambe doonaa.
Yahoo Password Cracker: Sida loo crack / Hack Your Yahoo Mail Password